काभ्रेमा बञ्चरो प्र’हार गरि जेठाजुले गरे बुहारीको ह’त्या ! प्रत्यक्षदर्शी यसो भन्छन् (हेर्नुस् भिडियो) – Online Nepal Site
श्रिमान बि’देशमा श्रीमती २८ लाख रूपैया लिएर अर्कैसग बिहे गरेको फोटो देखेपछि, दि’लज’ङ रु’दै मि’डियामा!
चकित भए, झाक्रीले मातालाई आगो खुवाउदै नचाए, लिए माताहरुको परिक्षा, अहिलेसम्मकै डरलाग्दो भिडियो हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
कन्चनकि आमालाई प्रहरी प्रशासनले निल डामै डाम हुनेगरि कु`टेपछि आमा रुदै मिडियामा ( हेर्नुस् भिडियो )
कन्चनको अस्पतालमा मृत्यु, मृत्यु अघि अनिशासंग बनाएका टिकटक अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल (भिडियो सहित)
कन्चन तिमी निभेको हैन प्रेम निभेको हो,प्रेमले हारेको छ कन्चन तिमिले जितेको छौ ,अन्तिमपटक कन्चनलाई हेर्नुस् (भिडियो हेर्नुस् )
मध्यरातमा अनिशाको घर जलाएर गाउँलेहरुले; हवाई फा य रि ङ ले पनि सीप लागेन (हेर्नुस् भिडियो)
प्रचण्डले ४१ अर्ब रकम दुबईमा लुकाएको खुलासाको भिडियो भाइरल [ भिडियोसहित ]
मुख्य पृष्ठ /Video/काभ्रेमा बञ्चरो प्र’हार गरि जेठाजुले गरे बुहारीको ह’त्या ! प्रत्यक्षदर्शी यसो भन्छन् (हेर्नुस् भिडियो)
काभ्रेमा बञ्चरो प्र’हार गरि जेठाजुले गरे बुहारीको ह’त्या ! प्रत्यक्षदर्शी यसो भन्छन् (हेर्नुस् भिडियो)
1,335 1 minute read
काभ्रेपलाञ्चोकस्थित नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ८ दाप्चामा आज बिहान आफ्नै जेठाजुले धा’रिलो ह’तियार (बञ्चरो) प्र’हार गरी बुहारीको ह’त्या गरेका छन् । दाप्चाका सुदर्शन अधिकारीले अन्दाजी ३६ वर्षीया कान्छी बुहारी रञ्जना तिमल्सिनालाई बञ्चरोे प्र’हार गरी ह’त्या गरेको स्थानीयले बताएका छन् । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
स्थानीयका अनुसार सुदर्शन अधिकारीले आँगनमा भाडा माझिरहेकी रञ्जनालाई पछाडिबाट बन्चरो प्र’हार गरेका थिए । बन्चरो प्र’हारबाट रन्जनाको घ’टनास्थलमै मृ’त्यु भएको स्थानीयले बताएका छन् ।
नजिकै घरमा रहेकी बुहारीलाई बञ्चरो प्र’हार गरी ह’त्या गर्ने जेठाजु सुदर्शन अधिकारीलाई काभ्रे प्रहरीले प’क्राउ गरेको छ । अहिले उनी प्रहरी हि’रासतमा छन् । घरायसी झै–झ’गडाको कारण रन्जनाको ह’त्या भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसनधानबाट खुलेको छ ।
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्रहरीले मृ’तकको श’व पो’ष्टमा’र्टमको लागि पठाइएको र घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । घ’टना के कसरी भएको हो भन्ने बारेमा स्थानीयसँगको कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहोस् : ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
Xi Jinping: The Impact of China and After
श्रीमतीको ज्या न लिएर जेलमुक्त हुँदै पूर्वडिआइजी कारागारबाट बाहिर निस्किदै गर्दा गेटमा देखिएको यो दृश्य, प्रेमिका पनि लिन आइन (भिडियोसहित)
गाउँलेहरुले यो किन बाँचेको होला भनिदिंदा असाध्ययै रुन मन लाग्छ, जस्तो भएपनि मेरो छोरा हो मलाई त अरुकोभन्दा यसैको धेरै माया लाग्छ, (भिडियोसहित)
रमेशका साथी जीवन विस्ट आँखाको शल्यक्रिया गर्दै तीलगंगामा ; अब नन्दाले पनि गर्ने [ भिडियो सहित ]
हेटौडामा निस्कियो हजारौं महिलाको जुलुस, सुस्मिता घटनामा उठ्यो यस्तो शंका (भिडियो हेर्नुस्)